Maxaa u sababa in dhalintii ku kortey Somalilaan ay hadda ka soo taagan yihiin: WARBIXIN - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maxaa u sababa in dhalintii ku kortey Somalilaan ay hadda ka soo taagan yihiin: WARBIXIN
Sanado kahor waxa dhalinta ku dhashay Burco iyo Hargeysa ku weynaa magaca Somalilaan iyo goosashada, waa wax dhegahooda ku soo dhacayay muddo labaatan sano dhaaftey laakiin sanadahan u dambeeyay sheekadaasi waa soo afjarantey sida warbixintan aan ku eegayno.
Markaad fiiriso nabada ay dadku keensadeen iyo heshiisiinta beelaha ISAAQ ay heshiisiiyeen beelaha darifyada, waxa 1993 Boorama lagu dhisay maamul qardajeexa oo nabad loogu abuuraayay.
Waxase nabadaas looga faaiideystay in goosasho wax lagu raadiyo ay dabada ka riixayaan dawladaha jaarka iyo gumeysigii weynaa ee Ingiriiska oo ilaa hadda lugna kula jira dawlada dhexe haday danahooda ka waayaana ku gorgortami doona Somalilaan ayuu yiri Xuseen Warsame oo Hargeysa jooga.
Waxase taas ka horeeyay nidaam xumo iyo fadhiidnimo ka timi maamuladii isaga dambeeyay Somalilaan oo ah kuwii ugu liitey ee soo mara meel Somali degto laguna hungoobeen, waxana xooga la saaray in nabada la adkeeyo maadaama meelkale oo la tago ayna jirin ayuu raaciyay Xuseen Warsame.
Waxa lagu takrifalay wixii yaraa ee yaalay gobolka, waxa la jaqay cashuurtii hooyada bacadka fadhida halkii markaad eegto mudada nabada la haystay uu gobolku noqon lahaa mid Soomaali oo dhan ay ku soo hirato.
Waxase dhalintu ogaadeen in lagu awrkacsanayo oo kolba siyaasigii shalay caayaayay ama ku awrkacsanayaayay reer Koofur ayaa na xasuuqay uu haddana yidhaa leh war waxaasi waxba kama jiraan ee dhalinta cuqdada ka daaya.
”Waxaan dib u baadhey markaan arkey dagaaladii beeshu la gashay beelaha darifyada ayagoo isticmaalaya hubkii qarankii Somaliyeed iyo waxa ay maalin walba noo sheegeen ee ah waa nala xasuuqey inayna isla lahayn ayuu yiri Yuusuf C/raxmaan oo hadda Xamar ku sugan kana yiri Burco.
”Waxaa igu jirtey oo cuqdadu iiga buuxday reer Koofurka laakiin hadda waxaan ogaadey in reer Koofurka laftoodu dhiban yihiin oo ayna ogeynba colaad loo hayo ayuu raaciyay Yuusuf C/raxmaan.
”Maanta markaad Hargeysa iyo Burco dhexmarto waxa magacii ku soo hadhay inta ku nool mishaharka. Waxa nasiib daro noqotey in dhalintii ku kortey maamulka mudadii burburka ay hadda noqdaan kuwa aan la tusi karin magaca Somalilaan ayuu yiri Nuuradiin Aw Cabdi Diini oo ka tirsan xisbiga Wadani.
Warbxintii Maxamed Yuusuf